ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »5အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်အတူစုစုပေါင်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်လုံခြုံရေးအတွက်အမှတ် Check
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဖေဖော်ဝါရီ. 12 2020 | < 1
အဲဒီအနည်းငယ်ရိုးရှင်းသောစစ်ဆေးရေးဂိတ်များ Follow နှင့်သင်အလေးအိတ်၌ရှိသည်လိမ့်မယ်!
Passwords များကိုသင်မှတ်မိဖို့လွယ်ကူဖြစ်သင့်, ဒါပေမယ့်ခက်တဲ့အခြားမည်သူမဆိုခန့်မှန်းရန်အဘို့အ. အမည်များကိုမှတ်မိဖို့လွယ်ကူ, prying မျက်စိကိုခန့်မှန်းရန်အဘို့အဒါပေမယ့်ကိုယ့်အဖြစ်လွယ်ကူသော!
နေ့စွဲငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များတစ်ခုအံ့သြဖွယ်အဖွဲ့ဝင်စာတိုပေးပို့ရေးစနစ်ရှိပြီး. သင်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီနှင့်သက်သာခံစားရသည်အထိမည်သည့်အဆက်အသွယ်သတင်းအချက်အလက်ထုတ်ပေးစေခြင်းငှါအဆောတလျင်မထားပါနဲ့. တစ်စုံတစ်ဦးကိုသင်တွန်းအားပေးမခံပါနဲ့. သင့်ရဲ့အရှိန်အဟုန်မှာ ယူ. မင်္ဂလာဖြစ်.
ထို site ပေါ်တွင်တစ်စုံတစ်ဦးကပိုက်ဆံချေးဖို့ဆိုလျှင်, သတိပေးခေါင်းလောင်းထိုးလက်စွပ်မှစတင်သင့်. ထို site ငွေအပေါ်မှာမည်သူမဆိုမပေးပါနဲ့, အကြောင်းရင်းဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်ဘယ်လောက်ကောင်းနေပါစေ. စုံစမ်းရန်ပျော်ရွှင်ဖြစ်ရလိမ့်မည်တော်မူသောငါတို့၏ Support Team သို့မှပိုက်ဆံတောင်းသောသူမည်သည့်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံသတင်းပို့ ကျေးဇူးပြု..
အောက်ခြေလိုင်းသင်အမြဲထိန်းချုပ်နေထိုင်သင့်သောကြောင့်. အများသုံးတဲ့အရပ်ဌာန၌တွေ့ဆုံ, တစ်စုံတစ်ဦးကပြောပြသည့်အခါအဘယ်မှာသင်တာပေါ့, ကိုကျန်းမာယ့်ကိုအတည်ပြုရန်ပေးထားသောအချိန်မှာသူတို့ကိုခေါ်ရန်စီစဉ်. သင့်ရဲ့ရက်စွဲသည်ထိုက်တန်လျှင်, သူတို့လုံးဝကိုနားလည်သဘောပေါက်ရပါလိမ့်မယ်.
သင်အွန်လိုင်းတွေ့ဆုံရန်လူမျိုး၏ကျယ်ပြန့်အများစုပဲသင်နှင့်တူစစ်မှန်သောလူဖြစ်ရလိမ့်မယ်, ရိုးရှင်းစွာရက်စွဲတစ်ခုဒါမှမဟုတ်တချို့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကိုရှာနေကြသူ. နေသမျှကာလပတ်လုံးကိုသင်၌ရွှေစည်းမျဉ်းများလိုက်နာရန်နှင့်ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးယူအဖြစ် – ငါတို့သည်သင်တို့ပျော်ရွှင်စရာရှိသည်လိမ့်မယ်သေချာင်!
သတိရ, နေ့စွဲအကြှနျုပျ၏ပေသင်သည်မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသေးစိတ်ကိုတောင်းဆို e-mail ပေးပို့ဘယ်တော့မှလိမ့်မည်.